Ukuhlaziywa kwe-Wallet: Guqula i-zPIV v1 kwi-PIV ukuze ulungiselele i-zPoS! | PIVX
Ukuhlaziywa kwe-Wallet: Guqula i-zPIV v1 kwi-PIV ukuze ulungiselele i-zPoS!
Njengoko sikhankanywe kwi-PIVX Core Wallet 3.1.0 ukukhutshwa kwexesha, sikhuthaza kakhulu ukuguqula nayiphi na imali egcinwe njenge-zPIV kwakhona kwi-PIV de emva kokuba i-zPIV v2 isebenze ngo-Ephreli 7:
Naliphina i-zPIV eboniswe ngesikhwama se-3.0.6 nangaphantsi asiyi kuba ne-qualification ye-zPIV, kwaye ayiyi kukwazi ukuxhaswa ngembewu. Sincoma ukuba uguqule i-zPIV yakho ekhoyo kwi-PIV ngaphambi kokuba ikhutshwe okwesikhashana ngomhla we-29 Matshi, kwaye uyibuyisele kwi-ZPIV usebenzisa i-wallet entsha (v3.1.0) kunye ne-zPIV v2 isebenze ngo-Apreli wesi-7 ukuqinisekisa ukuba unako ukufumana zonke iinzuzo. .
Phakathi kwemihla kaMatshi 29 no-Ephreli wesi-7, i-zPIV ayiyi kufumaneka. Oku kuthetha ukuba awukwazi ukuthumela, ukufumana, okanye u-PIV kwi-zPIV, okanye i-zPIV kwi-PIV. Naliphina i-zPIV okwangoku ehambayo ayiyi kufaneleka kwi-zPoS okanye i-Deterministic Minting, abayi kuba neemfuno ezifunekayo ukuze bakwazi ukufumana iimpawu ezintsha.
Ukuba awuguquli i-zPIV yakho kwi-PIV ngaphambi kwe-Matshi 29 kwaye uzame ukufaka i-zPIV v1 xa i-zPoS isebenze, awuyi kuzuza nayiphi na imivuzo njengoko i-zPIV v1 ayinakuthathaka.
Nceda uqaphele, nayiphina i-zPIV engaguquki phambi koMatshi 29 ayiyi kulahleka.
Ezi zPIV aziyi kuthatha ulwazi oluyimfuneko ukuba zifaneleke kwiZPoS okanye kwi-Deterministic Functionalities. Uya kusakwazi ukuthumela nokuguqula i-zPIV v1 emva kokuba i-zPIV iphinda ivuselelwe ngo-Ephreli 7.
Inyathelo lokuqala: Vala i-Auto Mint:
Ngaphambi kokuba uguqule i-zPIV yakho kwi-PIV, nceda ucime isici sokuzenzekelayo (i-automint feature) kwi-PIVX Core Wallet ukuze ukhuphe i-zPIV eyongeziweyo emva kokuguqulwa.
SteInyathelo 1: Vula i-PIVX enkulu ye-Wallet
Inyathelo 2: Vumela iWallet ukuba ivumelanise ngokupheleleyo ukuCima
Inyathelo lesi-3: Cofa kwiZiko leBar Menu
Inyathelo 4: Khetha “Vula ifayile yokuLungiselelwa kweWallet”
Qaphela abasebenzisi be-Mac OS: Kukhona umcimbi owaziwayo xa uzama ukungena kwifayile yoqwalaselo. Ukuba ufumana le ngxaki, nceda ulandele amanyathelo okulungisa iingxaki apha. Ukuba uqhubeka ufumana imiba, nceda uqhagamshelane nathi kwi-Discord kunye nelungu leqela elixhasayo liya kuvuyisa ukukunceda kwi-channel ye-#support.
Inyathelo 5: Faka i-enablezeromint = 0 Kwifayile yoqwalaselo
Inyathelo 6: Phuma kwiFayile yeWindows Window
Inyathelo lesi-7: Qala kabusha i-PIVX enkulu ye-Wallet
Isikhwama sakho se-PIVX esisisiseko asiyi kuphinda senze i-zPIV ivela kwi-PIV.
Inyathelo sesibini: Tshintsha i-zPIV kwakhona kwi-PIV:
Xa i-automint ikhutshiwe, ukudluliselwa kwe-zPIV kwi-PIV yinkqubo elula. Udinga nje “ukuzihlawula” i-zPIV yakho ekhoyo!
Inyathelo 1: Vula i-PIVX Wallet
Inyathelo 2: Hlulela kwi-Tab yobumfihlo
Inyathelo 3: Khetha ifayile evela kwi-Bar Menu ephezulu
Inyathelo 4: Cofa “Ukufumana idilesi”
Inyathelo 5: Khetha Idilesi ekhoyo, okanye Yakha idilesi entsha eya kufumana iPIV eguqukileyo.
Inyathelo 6: Namathisela idilesi efumanayo kwi “Field Pay” Field (Ubunini bemfihlo)
Inyathelo lesi-7: Faka isixa olifunayo ukuguqula kwi-zPIV ukuya kwi-PIV
Isinyathelo 8: Cofa: Sebenzisa i-Zerocoin
Isinyathelo 9: I-ZPIV yakho iya kuba yindleko, kwaye inani elilandelelanayo le-PIV liya kufunyanwa.
Inyathelo 10: Intsebenziswano iya kuViliswa kwiiNkcazo kunye neMathebhu yokuTshintshana.
Ukuba ufumana nayiphi na imiba ngeenkqubo ezi ngasentla, nceda uqhagamshelane neqela lethu loxhasi kwisiteshi se-#Sepport kwi-server yethu yet discord onoyofimana ngoku cofactor kula link: on our Discord server.
Nceda uqaphele ukuba ukuqhutyelwa kwabasebenzisi abaguqulela i-zPIV kwi-PIV kunokubangela ukulibaziseka ngexesha lokuthengiselana.